Fitantanan-draharaham-panjakana :: Nanamafy ny firosoana amin’ ny fanadiovana faobe ny Praiminisitra • AoRaha
Fitantanan-draharaham-panjakana Nanamafy ny firosoana amin’ ny fanadiovana faobe ny Praiminisitra
Hofongorina hatreny ifotony ny gaboraraka. « Tsy maintsy hisy fanavaozana goavana ny fitantanana ny raharaham- panjakana », hoy ny Praiminisitra, Ntsay Christian, nandritra ny fanokafana ny fampiofanana an’ireo tompon’andraiki-panjakana teny amin’ny Sekolim-pirenena fanofanana mpiasam-panjakana ambony (Enam) teny Androhibe, omaly. Nohamafisiny fa tsy maintsy hirosoan’ny fitondram-panjakana ny fanadiovana sy ny fanavaozana ny fomba fiasa eo anivon’ ireo sampandraharaham-panjakana, amin’izao fotoana izao.
«Hojerena ireo olana izay mamono na manimba ny asam-panjakana. Hisy ny famaritana ny karazana fepetra sy ny fomba hana- vaozana ireo sehatra sami- hafa eo anivon’ireo sampan- draharaham-panjakana. Eo ihany koa ny fanaovàna ny tomban’ezaka amin’ ireo asa tanterahina », hoy ny Lehiben’ny governemanta teo anoloan’ny mpanao gazety, teny Androhibe.
Nandritra ny fanamarihana ny tsingerin-taona faha-44 nahafatesan’ ny kolonely Ratsimandrava Richard, teny Ambohijatovo Ambony, indray dia notsindrian’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, mafy ny amin’ny hanajan’ireo ambaratongam-pahefana rehetra ny fitsipika mifehy ny asa tokony hotanterahin’ izy ireo.
Tsy nitsitsy teny mihitsy ny Praiminisitra nilaza fa «ny fampandrosoana ny firenena dia mila fandraisana andraikitra eny ifotony ary eo ambany fitarihan’ ny Filoham-pirenena sy ny governemanta ». « Ho hentitra amin’ny fanaraha- maso an’io andraikitra io ny fitondram-panjakana », hoy izy.
Karazana fanomezana antoka an’ireo fepetra noraisin’ny Filoha Rajoelina Andry tamin’ny Filankevitry ny minisitra farany teo izao nataon’ny Praiminisitra izao. Toromarika hentitra no nomen’ny Filoha momba an’io fanadiovana ny fomba fitantanana ny asam-panjakana io. Antony izay nananganana an’ilay Birao manokana hisahana ny fandraisana an’ireo fitarainana avy amin’ireo olom-pirenena mahatsapa fahoriana sy mety mahita ny goragora eo amin’ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana.
Eo, ohatra, ny fitarazohan’ ny famitana an’ireny taratasim-panjakana ireny. Na ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny fisiana kolikoly.
Fitantanan-draharaham-panjakana :: Nanamafy ny firosoana amin’ ny fanadiovana faobe ny Praiminisitra - ewa.mg dit :
[…] Fitantanan-draharaham-panjakana :: Nanamafy ny firosoana amin’ ny fanadiovana faobe ny Praiminisit… est apparu en premier sur […]
Fitaterana an-drenivohitra :: Ho hentitra amin’ny fampanajana ny bokin’andraikitra ireo kaoperativa
Fiaraha-miasa amin’ny vahiny :: Mitaky ny hanatanterahana an’ireo asa maika Rajoelina